China Diesel Engine Long Shaft Vetikal tobaim Fire mgbapụta ụlọ ọrụ na-emepụta | Tongke
♦ mgbapụta, ọkwọ ụgbọala, na njikwa na-ndokwasa on a nkịtị isi.
♦ Mpempe akwụkwọ na-ejupụtakarị na-ewepụ mkpa maka ebe dị iche iche arịgo.
Mpempe akwụkwọ na-ehichapụ mkpa ọ dị maka ijikọ njikọta na njikọta.
♦ Akụrụngwa na-abata na ngwakọta siri ike, na-enye ohere ngwa ngwa ma dị mfe ntinye na njikwa.
System Usoro omenala, gụnyere ngwa, akwa akwa, na nhazi maka iji nweta nkọwa nke ndị ahịa.
Iji hụ na imewe
TKFLO Vetikal tobaiti Ọkụ mgbapụta Auru:
A-♦ N'iji usoro na hydraulic dị elu, na-agbaso usoro Ashland iji mee ka agụba na-acha ọkụ, na-etinye usoro mkpuchi epoxy na ihe mgbochi, na nhọrọ dị mma nke ihe, mee ka mgbapụta ahụ nwee arụmọrụ magburu onwe ya na ogologo ndụ.
Hir Whirl ájá ngwaọrụ na maze-dị ka owuwu-eme ka ájá ike ịbanye biarin.
Engines Mmanụ diesel niile bụ nke ụlọ ma ọ bụ nke a na-ebubata dị elu, nke nwere atụmatụ nke omume ọma nke ịmalite, ikike siri ike maka ibubiga ya ókè, usoro siri ike, nke dị mfe maka mmezi, dị mfe iji, yana akpaghị aka.
Complete na-ụlọ ationgha ike
Ikike nyocha nke oru na ndi ahia nyere ya akụrụngwa maka ụkpụrụ NFPA niile
Kwụ ụdị maka ikike 2,500 gpm
Dị vetikal maka ikike nke 5,000 gpm
Modelsdị ntanetị n'ime ikike maka 1,500 gpm
Sudị mmiri nkwụsị maka ikike na 1,500 gpm
Draịva: electric moto ma ọ bụ mmanụ dizel engine
Nchịkọta ntọala na sistemụ ngwugwu.
Enwere ike inye igwe eletriki eletriki na Diesel Engine Drive nfuli ọkụ maka nchikota nke nfuli ọ bụla, draịva, njikwa na ngwa maka edepụtara ma kwado ya na ngwa ọrụ NONlisted fire. Ngwunye na sistemụ ngwugwu ejiri ụgwọ akwụ ụgwọ ọkụ ma na-enye ndị a
Iji mezuo nkwenye nke ụkpụrụ nke National Fire Protection Association dịka e bipụtara na Pamphlet 20 ha, mbipụta ugbu a, a chọrọ ụfọdụ ngwa maka nrụnye mgbapụta ọkụ niile. Ha ga-adịgasị iche, ka o kwekọọ, iji gboo mkpa nke ntinye onye ọ bụla na ihe ndị isi mkpuchi mkpuchi obodo chọrọ. Ngwongwo Tongke na-enye otutu ihe eji agba oku nke gunyere: ihe ntanye ihe ntanye, ihe nkpuchi achicha, ihe ndi ozo, ndi na-eme ka ndi mmadu na-acho ha, ndi na-acho onu ahia, ndi na-acho onu ahia, ndi nkpu ahihia, ndi ozo na ndi ozo, valvụ enyemaka, valvụ a na-ewepụta ikuku, igwe na-agba ọsọ, na bọlbụ na-agbapụ. N'agbanyeghị ihe ndị a chọrọ, Sterling nwere akara zuru oke nke ngwa ndị dịnụ ma nwee ike mejupụta ihe achọrọ maka ntinye ọ bụla.
Chaatị ndị edegharịrị n'okpuru gosipụtara nke ọma ọtụtụ ngwa yana nhọrọ draịva ndị dị na nfuli ọkụ Tongke na sistemụ ngwugwu niile.
Nke gara aga: API610 ANSI Chemical Usoro ọkọlọtọ Petrochemical Arụrụ Mmanụ Mmanụ Nyefe mgbapụta
Osote: LDP Series Single-Stage End-mmiri Horizontal Centrifugal Pure Water Pumps
Ike 20-1400 m3/ h
Nrụgide Ọrụ ruru 2.0Mpa
Dayameta DN 25-400 mm
Liquid mmiri dị ọcha ma ọ bụ mmiri nkịtị na mmiri mmiri mmiri Mpụpụ, PH = 6.5-8.5, ọdịnaya ion chloride = 400mg / l, ọkara okpomọkụ na-erughị 40 ℃
Mgbapụta ọsọ 1000-3600 RPM
Injin Cummins, Deutz, Perkin ma ọ bụ akara China ndị ọzọ
Bowl: Nkedo ígwè, igwe anaghị agba nchara
Osisi: Igwe anaghị agba nchara
Impeller: Nkedo ígwè, Ọla ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara
Igbapụta isi: Nkedo ígwè ma ọ bụ carbon ígwè
A na-ejikarị ya eme ihe maka mmiri ọkụ na petrochemical, gas nkịtị, osisi ike, akwa owu, wharf, ụgbọelu, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ dị elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. O nwekwara ike tinye n'ọrụ ụgbọ mmiri, tankị ụgbọ mmiri, ụgbọ ọkụ na oge inye ndị ọzọ.
Single ogbo ọgwụgwụ mmiri centrifugal ụdị NFPA ...